Toerana fitsangatsanganana ankafizin'ny Amerikanina amin'izao fahavaratra izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Toerana fitsangatsanganana ankafizin'ny Amerikanina amin'izao fahavaratra izao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Taorian'ny roa taona nifanesy voamariky ny fiantraikan'ny valan'aretina Covid-19 amin'ny fizahan-tany, ny mpamatsy fifandraisana finday, Ubigi, dia nanambara ny fironana fitsangatsanganana manerantany nandritra ny fahavaratra.
Indrindra indrindra, mitatitra ireo toerana fizahan-tany ankafizin'ny Amerikana mifototra amin'ny fanjifana angon-dry zareo mandritra ny fahavaratra.
Ity fandalinana iraisam-pirenena ity dia mifototra amin'ny famakafakana ny fanjifana drafitra data finday eSIM nataon'ny santionan'ny mpampiasa 10,000.
Izy io dia narafitra manodidina ny fe-potoana eo anelanelan'ny Jolay sy Aogositra 2021 araka ny firenena nipetrahan'ny mpampiasa.
Voalohany indrindra, eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, dia nisy fisondrotana lehibe teo amin'ny fanjifana angon-drakitra nandritra ny fahavaratra, satria nesorina ny famerana ny dia any amin'ny firenena maro. Nitombo avo roa heny ny habetsahan'ny varotra drafitr'asa data tamin'ny Jolay sy Aogositra 2021 raha oharina tamin'ny Mey sy Jona 2021, ary nitombo avo telo heny izany (+ 246%) raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny 2020.
Eo amin'ny sehatry ny firenena, Amerikana efa tompondakan'ny eSIM fananganana, mametraka ny tenany ho mpampiasa voalohany amin'ny drafitra data any ivelany sy any an-trano. Nahoana ary taiza izy ireo?
TOROHEVITRA FAMPIANARANA HO AN'NY ETAZONIA
Ny Amerikana dia tompon-daka amin'ny fampiasana angon-drakitra mandehandeha
• Ny 73% amin'ny angon-drakitra lanin'ny Amerikana dia nampiasaina tany ivelany.
Eoropa no toerana fizahan-tany ambony indrindra ho an'ny Amerikana tamin'ity fahavaratra ity
• Ny 55% amin'ny angon-drakitra lanin'ny Amerikanina misoratra anarana amin'ny drafitra data dia natao tany Eorôpa, mampiseho ny faniriany amin'ity faritra ara-jeografika ity.
• Anisan'ireo firenena eoropeanina notsidihina, i Etazonia dia nankasitraka manokana an'i Frantsa, ka ny 21% amin'ny totalin'ny fanjifana angon-drakitra ao amin'ity firenena ity amin'ity fahavaratra ity.
• Nandeha tany amin'ny toerana Eoropeana hafa toa an'i Espaina (6%), Gresy (6%), Grande-Bretagne (6%) ary Italia (5%) ihany koa ny mpizahatany amerikana.
Zava-dehibe ny fampiasana ny eSIM manerana ny firenena
• Na dia nampiasa ny eSIM any ivelany aza ny Amerikana, dia nampiasa drafitra momba ny angon-drakitra ihany koa izy ireo mba handehanana any Etazonia ho an'ny 27% amin'ny totalin'ny fanjifana angon-drakitra nandritra ny vanim-potoana.